Koety: Navotsotra ilay bilaogera nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2019 7:05 GMT
Taorian'ny tabataba teo an-toerana sy avy any amin'ny faritra, navotsotra tany Koety androany vao maraina ilay bilaogera Koesiana Bashar Al-Sayegh. Raha nankalaza ny famotsorana azy ny bilaogera sasany, ny hafa kosa nampitandrina fa mety ho marika faneriterena bebe kokoa izay mety hampihenana ny fahalalaham-pitenenana ao Koety izany. Bilaogera iray hafa naneho ny tsy fankasitrahany ny polisy izay mandika lalàna ary namoaka lahatsary ahitana polisy miherisetra ara-batana amin'ireo mpiasa Aziatika ao amin'ny firenena manankarena solika.
Nosamborina i Al-Sayegh taorian'ny fanehoan-kevitra nataona mpaneho hevitra tsy fantatra anarana, izay naniratsira ny filoham-pirenena Koesiana, Shaikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah tao amin'ny forum antserasera (Ar) tantaniny.
Nahitana ny sary etsy ambony ny tranonkala antserasera Koesiana Al Aan, izay mampiseho ireo mpanohana milanja an'i Al-Sayegh eo an-tsorony.
Manoratra ao amin'ny forum-ny, Al-Sayegh nampanantena hanohy ny bilaoginy (Ar):
Blurted by The Aggressor nilaza fa ny fisamborana an'i Al Sayegh dia midika fandefasan-kafatra ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy ao Koety.
The Ultimate, na izany aza, nandray lalana hafa ary manolotra tononkalo ho an'i Al Sayegh.